Ninka dadka ku laayay iskuulka Florida wuxuu ahaa agoon is ciilay - BBC News Somali
Kumannaan qof ayaa ka qaybgalay baroordiiq loo samaynayay dadkii ku dhintay weerarkaasi
Wiil dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in uu ku dilay 17 qof dugsi sare oo ku yaalla Florida ayaa qirtay toogashadaasi, sida ay booliiska sheegeen.
Nikolas Cruz, oo 19 jir ah ayaa sheegay in uu iskuulka yimid islamarkana uu billaabay in uu toogto ardayda ka hor inta uusan baxsan , sida ku cad dikumiintiga maxkamadda.
Waxaa la soo taagay maxkmad isaga oo lagu soo oogay dacwad ah in uu gaystay dil ula kac ah.
Laanta dambi barista ee FBI ayaa dhankooda qirtay in sanaddii aanu soo dhaafnay ay heleen macluumaad ku saabsan ninkan.
Waxaa soo baxaya sawir aad u fool xun oo ku saabsan ninka toogashada ka geystay dugsiga sare ee Marjory Stoneman Douglas High School ee Parkland, Florida, halkaas oo uu ku laayay 17 qof, kuwa badan oo kalena uu ku dhaawacay.
Waa sawir ay dadka aad u garanayaan, marar badana maankooda kusoo noqnoqday.
Waxaa la sheegay in Nikolas Cruz uu ahaa wiil kaligiis ah, rabshad badan, waalidkiisna ay dhinteen, kaas oo laga eryay iskuulka kal hore.
Mid ka mid ah ardayda dhigata iskuulka ayaa sheegay in marar hore ardayda ay wiilkan kula kaftameen in uu maalin noqon doono nin toogasho ba'an ka geysta iskuulka.
Waxaa xaalka uga sii daray in hoggaamiyaha koox xagjirka ah caddaanka uu sheegay in Cruz uu ka tirsanaa kooxdooda, islamarkaasna uu tabobar ka qeybqaatay.
Macalin xisaabta dhiga oo lagu magacaabo Jim Gard ayaa wargeyska Miami Herald u sheegay in macalimiinta iskuulka loosoo qoray email looga digayo hanjabaado uu wiilkan horey u jeediyay, taas oo keentay in iskuulka laga eryo.
Waxa uu Gard intaas ku daray in wiilkan uu aad u jeclaa gabadh iskuulka dhigata, heer uu gaaray in uu dabogalo, meel kastana uga dabo tago iyada oo aan ogol ka ahayn.
Xigashada Sawirka, Image copyrightINSTAGRAM
Cruz waxa uu baraha bulshada soo dhigay sawirro isaga oo hub heysta
Mid ka mid ah ardayda ayaa sheegay in Cruz uu aad ugu waalnaa hubka, isaga oo marar badan xitaa si ula kac ah u yeeriyay alaarmiga dabka ee iskuulka, illaa heer iskuulka laga eryey.
Cruz ma uusan lahayn wax saaxiibo, qof kasta oo ay isla hadlaane ganafka ayuu galin jiray.
Ciwaan uu ku lahaa barta Instagram-ka ayaa waxaa ka muuqday sawirrada tooriyo iyo hub kala duwan, inkasta oo markii dambe uu tiray ciwaankii oo dhanba. Mid ka mid ah sawirrada ayaa waxaa ka muuqda qori iyo qasnad rasaas ah oo sariir dulsaaran.
Sawir kale ayaa waxaa ka muuqda Cruz oo gashan koofiyadda ay ku qorantahay Make America Great Again oo ay xirtaan taageerayaasha madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Arday ayaa sheegay in marar horena uu koofiyadaas usoo qaatay iskuulka.
Duqa magaalada ay arrinta ka dhacday Beam Furr ayaa taleefishinka CNN u sheegay in Cruz uu sanad ka hor tagay isbitaal xagga dhimirka ah, kaas oo uu codsaday in daweyn la siiyo.
Xigashada Sawirka, Image copyrightWPTV
Cruz wuxuu ahaa ilmo aad u rabshada badan
Waxa uu dambiga ku geystay qori noociisu yahay AR-15 oo uu si sharci ah ku iibsaday.
Dadkii dariska la ahaa qaarkood waxa ay sheegeen in Cruz si fiican looga garanayay aagga in uu ahaa nin rabshad badan oo dadka oo dhan ay ka fogaadaan.
Haweenay lagu magacaabo Shelby Speno oo daris la ahayd ayaa sheegtay in uu digaagta ka laayay, ilmo qaniinay, uu xaday sanduuqa waraaqaha boostada lagu soo rido oo qof daris ah lahaa, iyo in uu ukumo fuunto ah ku tuuray gaarigeeda.
"Cunugaas waxa uu leeyahay fiiro kuuris ah oo aad looga baqo, waan iska garan karay in uu qof wax yeeleeyn doono, balse ma ogeyn kan uu yahay iyo meesha" ayay tiri Shelby.
Cruz wuxuu ahaa ilmo agoon ah oo ay qoys kale soo korsadeen, iyada oo labadii waalid ee korsadayba ay geeriyoodeen.
Markii dambe waxa uu lasoo dagay qoys wiil ay iskuulka isku barteen, wuuna la noolaa wixii ka dambeeyay markii hooyadii korsatay ay dhimatay sanad ka hor.
Kumannaan qof oo isugu soo baxay baroordiiq loo sameeyay dadkii lagu laayay iskuulka Florida
Trump oo dalbaday in la dilo ninka lagu tuhunsan yahay weerarkii New York
Siddeed ruux oo ku dhimatay toogasho ka dhacday Maraykanka
Macallimiinta gobol Maraykanka ku yaalla oo la hubaynayo
Maalintii uu falka samayn rabay, waa uu iska jiiftay, reerkana wuxu u sheegay sabab been ah, mardambe ayuu qaatay gaadiidka Uber, wuxuuna aaday iskuulkiisii hore, isaga oo reerka u sheegay in ay tahay maalinta jacaylka adduunka, oo uusan aadin iskuulkiisa cusub.
Garyaqaan ay maxkamadda u qabatay ayaa Mr Cruz ku tilmaamay bini'aadam nafsad ahaan u burburay.